ငှက်ပြာခြောက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ငှက်ပြာခြောက် (Sitta castanea) သည် ဆစ်တီဒေ မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ ပါဏဗေဒအမည်မှာ ဆစ်တာ ကက်စ တာနီအာ နီဂလက်တာ ဖြစ်သည်။ အလျား ၆ လက်မခန့်ရှိသည်။ အမြီးတိုသည်။ နှုတ်သီး ရှည်၍ ချွန်သည်။ တစ်ကိုယ်လုံးတွင် မွဲပြာရောင် လွှမ်းနေသည်။ ငှက်မအရောင်သည် ငှက်ဖိုအရောင်ထက် ဖျော့သည်။ အချို့ငှက်ပြာချောက်မျိုးတွင် လည်ချောင်း၊ ရင်အုပ်နှင့် ဝမ်းပိုက်တို့သည် တစ်ရောင်တည်း ဖြစ်သည်။ နီပေါနိုင်ငံ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့တွင် တွေ့ရှိရလေ့ရှိသည်။
ငှက်ပြာချောင်သည် တောင်ခြေနှင့် လွင်တီးခေါင်များတွင် နေလေ့ရှိသည်။ မန်ကျည်းပင်၊ ကုဣိပင်များတွင် ကျက်စားတတ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် အသံအလွန်ကျယ်သော်လည်း အသံကို တိုးလိုက် ကျယ်လိုက်နှင့် အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲ အော်လေ့ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ စူးရှစွာ အော်တတ်သည်။
မတ်လမှ မေလအထိအချိန်မှာ ငှက်ပြာချောက်၏သားပေါက်ချိန် ဖြစ်သည်။ အသိုက်ကို သစ်ခေါင်းထဲတွင် သစ်ရွက်ခြောက်များ ခင်း၍ ပြုလုပ်သည်။ သစ်ခေါင်းဝကို ဝင်သာရုံလောက်သာ ချန်လှပ်၍ ရွံ့ပိတ်ထား၏။ တစ်မြုံလျှင် ၂ ဥမှ ၆ ဥအထိ ရှိသည်။ ဥအရောင်မှာ အောက်ခံအဖြူရောင်တွင် အနီပြောက်၊ ခရမ်းရောင် အပြောက်ကလေးများ ရှိသည်။ ငှက်ပြာချောင်ကို မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသများ၊ ချင်းတောင်၊ အထက်ချင်းတွင်းဒေသတို့တွင် တွေ့ရ၏။ 
at Neora Valley in Neora ValleyNational Park in Darjeeling district of West Bengal, India.
Sitta cinnamoventris at Jayanti in Buxa Tiger Reserve in Jalpaiguri district of West Bengal, India.
↑ ၁.၀ ၁.၁ BirdLife International (2016). "Sitta castanea". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T103880076A94281309.en.
↑ "A checklist of birds of Kerala, India" (17 November 2015). Journal of Threatened Taxa7(13): 7983–8009. doi:10.11609/JoTT.2001.7.13.7983-8009.
↑ eBird India- Kerala။ Cornell Lab of Ornithology။ 1 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ K. K.၊ Neelakantan (2017)။ Keralathile Pakshikal (Birds of Kerala) (5 ed.)။ Kerala Sahitya Akademi။ p. 511။ ISBN 978-81-7690-251-9။
↑ Grimmett၊ Richard; Inskipp၊ Tim; P.O.၊ Nameer (2007)။ Birds of Southern India [Thekke Indiayile Pakshikal (Malayalam version)]။ Mumbai: BNHS။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ငှက်ပြာခြောက်&oldid=718849" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။